ZTE patent i-smartphone esonga ngokuthe nkqo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, ZTE
Ii-smartphones ezisongelayo bezilawula i-Android namhlanje kwiiveki ezimbalwa. Iimodeli ezimbini zokuqala zokubaluleka zinikiwe kwezi veki, njengoko kunjalo kwimeko ye- Samsung Galaxy Fold kunye Huawei Mate X. Ukongeza, umsebenzi uyaqhubeka kwiimodeli ezintsha eziza kubakho kwintengiso kwikamva. IMotorola yenye yezi brand, kwaye singongeza enye kuluhlu. Kuba iZTE inelungelo elilodwa lomenzi elitsha.
Umenzi waseTshayina unayo i-smartphone enelungelo elilodwa lomenzi elisonga ngokuthe nkqo. Ke i-ZTE isibonisa enye inkqubo yokusonga ifowuni. Ndinomdla, kuba uphawu ngalunye lusishiya nenkqubo eyahlukileyo ngokuxhomekeke kwiifowuni zabo.
I-ZTE ayilulo uphawu lokuqala ukuba nombono onjalo. Ukusukela enye ye Iifowuni ezintsha ezinokusongelwa ezilungiselelwe yiSamsungingasebenza ngale ndlela nayo. Uluvo kukuba isikrini sinobungakanani obuqhelekileyo, kodwa sinokusongwa, ngendlela eyenza kube lula ngakumbi ukukwazi ukuhambisa isixhobo esichaziweyo.
Kule foto sinokubona ilungelo lobunikazi lale fowuni kumenzi waseTshayina. Uyilo olwahluke mpela kule nto siyibonayo kwezinye iifowuni ezinjengeMate X okanye iGolden Fold. Kule meko inokuba njalo ifana ngakumbi neefowuni zeklasikhell zakudala, ezisongiweyo zibe sisiqingatha. Kule meko kuphela siscreen esisongiweyo kwisiqingatha.
Ngelo xesha asinalo ulwazi oluthe kratya ngezicwangciso zeZTE zesi sixhobongaphandle kwale patent. Ke ngoko, asazi ukuba uphawu lusebenza kuyo kwaye sinethemba lokuba luya kufikelela kwintengiso. Ngelixa inkampani ngoku ixakekile ngokubuyela kwayo ngaphambili, kulandela iingxaki zayo kwi2018.
Kungenxa yoko le nto sikwazi ukubabona kwi-MWC 2019, apho iZTE isishiye khona ifowuni yakho yokuqala ye-5G. Inyathelo elilandelayo lophawu kukumiliselwa kweefowuni ezisongekayo. I-patent yokuqala sele iyinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-ZTE patent ifowuni esonga ngokuthe nkqo
I-OPPO ukumilisela i-10x yefowuni yokusondeza ngo-Epreli
Honor Magic 2 3D: Inguqulelo ephuculweyo yefowuni isemthethweni